Mpanamboatra sy mpamatsy mpamily | China Order Picker Factory
Mpikirakira kaomandydia fitaovana tena ilaina amin'ny fitaovan'ny trano fitehirizana, ary mitana anjara asa lehibe amin'ny sehatry ny fikirakirana fitaovana. Eto izahay dia tena mamporisika ny mpamily kaomandy voatosika. Satria manana rafitra fanaraha-maso mifandanja izy io, rafitra fiarovana pothole mandeha ho azy, azo haidina amin'ny haavony feno, kodiarana tsy misy marika, rafitra famotehana mandeha ho azy, rafitra fampidinana vonjy maika, bokotra fijanonana vonjy maika, valizy mitazona varingarina ary rafitra diagnostika an-tsambo sns. Dia tena mahomby fitaovana amin'ny asan'ny trano fanatobiana entana.
Self propelled order picker dia havaozina amin'ny base picker elektrika semi-elatra, azo entina amin'ny lampihazo izay mahatonga ny fitaovana fitehirizam-bokatra mahomby kokoa, tsy ilaina ny mampihena ny lampihazo dia afindra ny toerana iasana
Ny mpanangona kaomandy elektrika dia matetika ampiasaina amin'ny fikirakirana ny akora fanatobiana entana, ny mpiasa dia afaka mampiasa azy haka ny entana na boaty sns..izay ao anaty talantalana avo.
Amin'ny alàlan'ny herin'ny famatsian-batterie dia afaka miasa mandritra ny tontolo andro izy aorian'ny famenoana fotoana iray feno. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny mpamaky karazan-dahatsoratra mifindra tanana, ny teboka lehibe indrindra dia rehefa ampiasainao izany dia mila manokatra ny tongotra tohana amin'ny tany ianao avy eo manomboka manandratra hanao ilay asa. koa raha mila afindrao matetika ny mpamaky kaomandy avy eo amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa, dia tsy ny safidinao ny karazan-dahatsoratra manara-penitra no safidinao tsara indrindra.